दिल्लीनीति: विदेशमन्त्रीको सदभाव : अर्थमन्त्रीको दबाब - inaruwaonline.com
दिल्लीनीति: विदेशमन्त्रीको सदभाव : अर्थमन्त्रीको दबाब
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १९, २०७४ समय: ९:१७:५५
सद्भाव बोकेर स्वराज काठमाडौं उत्रिएकै दिन दिल्ली संसदमा प्रस्तुत बजेटद्वारा नेपाली अर्थ क्षेत्रमा धक्का
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारसँग भारतनिकट रहेर काम गर्न आतुर रहेको सन्देश दिएकी छिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा बिहीबार काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रूपमा हेरिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘वन अन वन’ पहिलो भेटवार्ता गर्दै स्वराजले यस्तो सन्देश सुनाएकी हुन् ।
तीन साताकै बीचमा ओलीको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना देखिएका वेला नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न भारत इच्छुक रहेको उनको सन्देश थियो । विमानस्थलबाट ओलीसहित एमाले नेतृत्वसँगको भेटवार्ताका लागि सीधै होटेल सोल्टी क्राउन प्लाजा पुगेकी स्वराजले प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा गठबन्धनले बहुमत जनसमर्थन प्राप्त गरेर दुवैतिर सरकार बनाउन लागेकोमा बधाईसमेत दिइन् ।
‘मेरोतर्फबाट मात्रै होइन, मेरो दल र भारत सरकारका तर्फबाट प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गर्नुभएको बहुमत जनसमर्थनप्रति तपाईंहरूलाई धेरै–धेरै बधाई छ,’ स्वराजको भनाइ उद्धृत गर्दै एमाले नेता डा. राजन भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले त टेलिफोन गरेरै बधाई भनिसक्नुभएको छ, तर पनि उहाँले मलाई मेरैतर्फबाट बधाई दिनुहोस् भन्दै सन्देश पठाउनुभएको छ, केन्द्र र प्रदेशमा प्राप्त गर्नुभएको जनसमर्थनप्रति भोलिको कामका लागि तपाईंहरूलाई थप शुभकामना छ ।’ स्वराजको अभिव्यक्तिलाई नयाँ सरकारसँग भारत सुमधुर सम्बन्धका साथ अघि बढ्न चाहिरहेको कूटनीतिक सन्देशका रूपमा लिइएको छ ।
भेटवार्तामा विदेशमन्त्री स्वराजले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । जवाफमा ओलीले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भारतको सहयोग र सद्भाव रहेको भन्दै नेपालको समृद्धिका लागि भारतसँग सहकार्य र घनिष्ट सम्बन्धका साथ अघि बढ्न तयार रहेको बताएका थिए । भारतीय वायुसेनाको विशेष विमानमार्फत अपराह्न साढे ३ बजे काठमाडौं ओर्लिएलगत्तै स्वराजले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पहिलो ‘वन टु वन’ भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
पौने घन्टा वन–टु वनसहित तीन चरणमा छलफल
होटल सोल्टी क्राउन प्लाजामा ओली र स्वराजबीच साँझ पौने ७ बजेबाट पौने घन्टा वन टु वान, त्यसपछि सामूहिक र अन्तिममा डिनरसहित तीन चरणको बैठक भएको छ । दुई बैठक सकिएपछि स्वराजको सम्मानमा एमालेले छुट्टै रात्रीभोजको आयोजना गरेको थियो । सामूहिक भेटवार्तामा ओलीसहित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, भीमबहादुर रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, नेता विष्णु रिमाल र डा. भट्टराईलगायतका नेता सहभागी थिए । तीनै चरणमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रीत रहेर लामो छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
अर्थ राज्यमन्त्री राणाले गरे स्वागत
स्वराजलाई अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणाले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए । विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, भारत डेस्क हेर्ने सहसचिव भृगु ढुंगाना र प्रमुख शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारीसमेत उनको स्वागतार्थ उपस्थित थिए । विमानस्थल ओर्लिएलगत्तै उनी सिधै होटल सोल्टी क्राउन प्लाजा पुगेकी थिइन् ।
राजपा शीर्ष नेतासँग भेट
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले बिहीबारै राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूलाई भेटेकी छन् । होटल सोल्टीमा आधा घन्टासम्म भएको सामूहिक भेटवार्तामा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भएको राजपा नेताहरूले बताएका छन् । स्वराज भेट्न अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव पुगेका थिए ।
सरकारको नेतृत्वका लागि शुभकामना : सुषमा स्वराज, भारतीय विदेशमन्त्री
निर्वाचनमा तपाईंहरूले प्राप्त गर्नुभएको विजयप्रति बधाई भन्न चाहन्छु । मेरो तर्फबाट मात्रै होइन, मेरो दल र भारतका तर्फबाट तपाईंहरूलाई धेरै–धेरै बधाई छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले त टेलिफोन गरेरै बधाई भनिसक्नुभएको छ । तैपनि उहाँले मलाई मेरैतर्फबाट बधाई दिनुहोस् भन्दै सन्देश पठाउनुभएको छ । केन्द्र र प्रदेशमा प्राप्त गर्नुभएको जनसमर्थनप्रति भोलिका कामका लागि थप शुभकामना पनि छ ।
नेपाल–भारतबीच धेरै लामो गहिरो सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धलाई धेरै राम्रोसँग अगाडि लैजानुपर्छ । नेपाल हाम्रा लागि अत्यन्त नजिकको छिमेकी मुलुक हो र छिमेकीप्रति हामीले पहिलो प्राथमिकताको नीति अवलम्बन गर्दै आएका छौं । यो नीतिअनुसार पहिलेका कामलाई प्राथमिकतामा राखेरै सम्बन्ध अघि बढाउने भारत सरकारको नीति छ । हामीले अघि सारेका आयोजनालाई पनि त्यसअनुसार नै अघि बढाउन चाहिरहेका छौं ।
समृद्धिका लागि सहकार्यका साथ बढ्न चाहन्छौं
केपी ओली, अध्यक्ष, एमाले
काठमाडौंमा यहाँलाई स्वागत छ र बधाईप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई हामी नयाँ उचाइबाट अघि बढाउन चाहन्छौं । आजको चेतना, आवश्यकता र आजको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिवेशमा दुई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र मुलुकहरूबीचको सम्बन्धलाई कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अघि बढ्न चाहन्छौं । हाम्रा बीचमा साझा शत्रु गरिबी छ । हाम्रा बीचमा काम गर्न सकिने आर्थिक समृद्धि, विकासको बाटोमा साझा हिसाबले अघि बढ्न चाहन्छौं । यसमा एक–अर्कालाई सहयोग गरेर जाने हाम्रो उद्देश्य हो । हामी विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य र घनिष्ट सम्बन्धका साथ अघि बढ्न चाहन्छौं । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।